Soo degso Tom Airbus A300-600ST Beluga FSX - Rikoooo
downloads 60 707
Updated on 13 / 08 / 2018: Prepar3D v4 la jaan qaada, dib u hagaajinta cusub ee warshadaha Airbus
Updated on 07 / 29 / 2015: Dulqaadid P3D v1 - v2, FSX oo lagu daray dayactirka cusub ee Red Australian Airlines + aragtida kaameeraha: 13 banaanka aragtida diyaaradda, 2 gudaha aragtida xamuulka iyo xNUMX VC.
model si fiican u horumarsan, diyaaradda tani waxay u muuqataa in ay ka dunida kale la mid ah strangely nibiriga magiciisu yahay Beluga iman. Waxaa ka mid ah dhawaaqyada caadada, qol ah 3D functional, akhri buuga (FCM.pdf) in ay si sax ah u isticmaali jireen alaabtii on board.
Airbus A300-600ST (Baabuur Weyn) ama Beluga waa nooc ka mid ah A300-600 diyaarad ballaadhan oo lagu beddelo qaybo diyaaradeed iyo xamuul xad dhaaf ah ama duugmo leh. Waxaa si rasmi ah loogu yeeray "Super Transporter" markii ugu horeysay, laakiin magaca Beluga wuxuu noqday mid caan ah oo hadda si rasmi ah loo ansaxiyay.
Halkan waxaa ku habraaca loo furo albaabada dibadda:
Airbus A340-300 Diyaaradda Olombikada FSX